समाचार - चलो एक पराल गिरावट खेल होल्ड गरौं
प्लास्टिक २० औं शताब्दी को सबैभन्दा ठूलो आविष्कार को रूप मा सूचीबद्ध छ। प्लास्टिक एक दोहोरो तरवार जस्तै हो। जबकि हामीलाई सुविधा ल्याउन, यो पनि वातावरण को लागी एक भारी बोझ ल्याउँछ।
सेतो प्रदूषण को रोकथाम को लागी, विभिन्न देशहरु क्रमशः नियमहरु को एक श्रृंखला जारी गरेका छन्। २०२० को शुरुमा चीनले "प्लास्टिक प्रदूषण को उपचार लाई अझ सुदृढ पार्ने बारे मा राय" जारी गर्यो। २०२० को अन्त्य सम्म, चीन भर मा खानपान उद्योग गैर डिग्रेडेबल डिस्पोजेबल प्लास्टिक स्ट्रॉ को उपयोग लाई निषेध गर्नेछ।
वर्तमान मा, त्यहाँ तीन मुख्य प्रकार को पराला हामी बजार मा सामना गर्नु परेको छ: पीपी स्ट्रॉ, PLA स्ट्रॉ, र कागजको पराल.
बायाँ बाट: कागज पुआल, पीएलए पुआल, पीपी पुआल
बिभिन्न स्ट्रॉ को गिरावट प्रदर्शन को दृश्य मा, हामी एक पराल गिरावट प्रतियोगिता आयोजित।
हामीले प्राकृतिक परिस्थितिमा बिभिन्न सामाग्रीहरुको परालको कम्पोस्ट गिरावट अनुकरण गर्न र days० दिन पछि उनीहरुलाई के भएको थियो हेर्न को लागी माटो मा तीन फरक सामाग्री को पराल रोपे।
कम्पोस्ट क्षरण को 70 दिन पछि, पीपी स्ट्रॉ मूल रूप बाट अपरिवर्तित थिए।
कम्पोस्ट क्षरण को 70 दिन पछि, पीएलए पुआल उल्लेखनीय परिवर्तन भएको छैन।
कम्पोस्ट क्षरण को days० दिन पछि, कागज पुआल को अन्त स्पष्ट रूप सडेको र गिरावट भएको छ।
खेल परिणाम:कागज स्ट्रॉ गिरावट प्रतियोगिता को यो राउन्ड जित्यो.
हामी तीन स्ट्रॉ को पर्यावरणीय प्रदर्शन को एक सरल तुलना गर्न:
नवीकरणीय वा छैन
हो तर धेरै गाह्रो
हो र सजिलो
पोस्ट समय: अगस्त -09-2021